Belize - toetrandro
Fizahan-tany Amerika Avaratra
Belize dia firenena kely any Amerika Afovoany, manasaraka an'i Meksika sy Guatemala. Mandeha eto, mila manana hevitra ianao fa ity firenena ity dia manana kolontsaina manankarena, teraka talohan'ny vanim-potoanan'ny tantsaha, ary mampiseho ny fahalianana amin'ny kolontsaina kolonialy. Ankoatr'izay, ankoatra ny fanatanjahan-tena ara-kolontsaina sy ara-tantara, dia tokony hanokana fotoana ampy handinihana ireo toerana voajanahary tsy manam-paharoa, ny biby sy ny biby manan-karena.
Sehatry ny kolontsaina sy ara-tantara an'i Belize
Belize dia firenena manana tantara manankarena, eto ny sivilizasiona Maya fahiny. Noho izany, ao amin'ny faritanin'i Belize dia maro ireo manintona maneho io kolontsaina io. Azonao atao ny mametraka ireto manaraka ireto:
Caracol . Any atsimon'i Belize dia misy toeram-panorenana tranobe Maya - tanànan'i Ousitsa. Ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo mpahay siansa dia manaporofo fa tanàna misy mponina 150 000 eo ho eo, ny kianja afovoany (Karakol), izay misokatra ho an'ny mpizaha tany ankehitriny, dia nipoitra manodidina ny 10 km. Nahitana lozam-pifamoivoizana tany Caracol tamin'ny 1937 noho ny loggers izay niasa tany anaty ala teo an-toerana mba hikaroka karazam-borona tsy fahita firy. Nanomboka teo, dia nodinihin'ny fikarohana ambanin'ny tany ny toerana. Ny tanàna dia nahita toeram-pisakafoanana, tohodrano ary toeram-ponenana. Ny mahaliana dia ny findan'ireo satroboninahitra jade sy firavaka vehivavy.
Ny sisa tavela amin'ny Kahal Pecs - tanàn-dehibe any Maya, dia eo akaikin'ny San Ignacio ankehitriny . Ankehitriny dia hita tanteraka sy rava tanteraka ireo rava. Azo lazaina fa ny tranobe dia misy trano vato 34, anisan'izany ny fandroana sy trano fialofana kely. Ny fikarohana dia natao, ary mandraka androany, saingy na eo aza izany, ny tanàna dia misokatra ho an'ny mpizaha tany.
Ruines of Quayo . Raha mandeha any andrefan'ny tanànan'i Orange Walk ianao dia afaka mankany amin'ny tranonkala iray manan-tantara iray hafa - ny sisa tavela tamin'ny Maya Quayo. Io trano io dia tena mahaliana tokoa satria ity dia iray amin'ireo toerana tranainy indrindra amin'ny sivilizasiona Maya sy ny sivilizasiona izay mialoha azy ireo. Ao an-tanàna dia misy tranobe amin'ny endriky ny piramida nopetahana, ary koa ireo rafitra vato voalohany indrindra tamin'ny taona 2000 talohan'i JK. Afaka mankany Quayo ianao amin'ny alàlan'ny fiarakaretsaka na fiara voatsabo avy ao Orange Walk, fa mila misafidy ny fotoana hitsidihanao mialoha fotsiny ianao, satria tsy miasa isan'andro ny orinasa.
Lamanay . Ny sisa tavela tamin'ny foibe ara-kolontsaina sy ara-pivavahana fahiny tao Maya, izay miorina eo amoron'ny Ranomasina Karaiba. Manana tranobe maro hatramin'ny taona 1500 tany ho any izy io.
Shunantunich - tanàna iray izay foiben'ny fivavahana Maya fahiny. Nandritra ireo fikarohana ireo, dia hita ny zavatra maro momba ny fombafomba, napetraka ireo fitoerana masina piramida, ary koa zavatra sasantsasany notononin'ny arkeolojia ho mpanara-maso. Tao amin'ny toerana maro teo amin'ny tanàna fahiny, nisy rajako sy sarivongana miaraka amin'ny sarin'ny andriamanitra avo sy ny hazon'aina hita, nahitana sary sokitra mivantana teo amin'ilay vato.
Altun Ha . Tsy lavitra ny tanàna maoderin'ny Old High Highway no rava ny tanànan'i Altun Ha, tanàna maitso. Indrisy anefa fa tsy voatahiry ny anarana tany am-boalohany, ary Altun Ha no anarana noforonin'ireo mpikaroka. Ny sisa tavela tao an-tanàna dia nahitana tampoka nataon'ny mpanamory iray, mpikatroka antitra nandritra ny taonjato faha-20. Nanomboka teo, dia nisy ny fikarohana natao tany Altun Ha, izay nahitana ny porofo manamarina ny fisian'ny Mayan teo aloha teto amin'ity tany ity.
Serros dia iray amin'ireo tanàn-dehibe tamin'ny andron'ny Maya, ao akaikin'ny Bay Chetumal. Mahavariana fa ity tanàna ity dia tsy any amin'ny faritry ny kaontinanta, fa akaikin'ny morontsiraka. Ao anatin'izany no ahitanao ny masoko sy ny fanarahana ny fanompoam-pivavahan'ny andriamanitra masoandro sy ny jagoara, ary ny fitoerana masina fahiny ho an'ireny andriamanitra ireny, izay mipetraka eo amoron-drano, fa manatrika ny fasika tsy mankany amin'ny ranomasina, fa lalina ao amin'ny tanibe. Nisy fivarotana an-dranomasina mafana, tantely, volamena, jade ary obsidian natao tao an-tanàna.
Lubaantun dia faritany iray hafa momba ny sivilizasiona Maya. Nanomboka tamin'ny 1903 ny fikarohana natao tany. Mahavariana fa tao amin'io tanàna io no nisy ny artifact malaza iray - ny karandoha vita amin'ny kirany, izay mbola tsy fantatra hatramin'izao.
Belize dia manintona ny mpizahatany miaraka amin'ny toetrany tsy misy dikany, eto dia afaka mahita zavatra marary marobe ianao, izay ahitana ny:
Sila-manga lehibe iray ary ny harambato Belize barazy . Angamba, ireo no be mpitia malaza indrindra any Belize. Ny lavaka manga lehibe dia karazana voajanahary voajanahary eo amoron-tsiraka, izay manana endrika faribolana tsara, izay mahatratra 300 metatra sy avo lenta - 130 m. Io toerana io dia voasoratra ao amin'ny UNESCO, ary hita tao amin'ny Jacques-Yves Cousteau. Ho an'ny mpankafy mpihantona Ny lavaka manga lehibe iray dia saika toerana tsara indrindra hanidinana. Amin'ny habak'andro 70 m dia afaka mahita trondro misy trondro sy zavamaniry mahagaga.
Reserve Babun . Mahagaga, na dia firenena kely aza i Belize, dia misy faritra maro momba ny fiarovana ny natiora sy ny tahiry ao amin'ny faritaniny. Ny Baboon Reserve dia miaro ny fiarovana sy ny fampitomboana ny isan'ny mpihaza monkey, ireo solontenan'ny hazon'ny Belize. Eo akaikin'ny tanàna kelin'i Bermudian Landing izy io.
Kokskombe Nature Reserve . Ny fitarihana fototra amin'ny toeram-pambolena voajanahary no fiarovana ny mponina ao Amerika Atsimo jaguar. Ankoatra izany, karazam-borona saro-baventy mihoatra ny 100 no mitombo ao amin'ny tahiry, ny fandalinana ara-tsiansa ornitolojika dia atao matetika. Tsy ny faritra rehetra amin'ny valan-tseranana dia misokatra ho an'ny mpitsidika, ny faritra rakotra ala dia mihidy ho an'ny mpizaha tany. Misy toeram-ponenana natokana mandritra ny antsasak'adiny avy amin'ny tanànan'i Stan Creek.
Rio Ondo River . Io renirano lehibe indrindra ao amin'ny firenena io dia sisin-tany voajanahary eo anelanelan'i Belize sy Meksika. Feno rano izy io, rakotra ala matevina eo amin'ny renirano. Nandritra ny fotoana lavitr'io fotoana io, ny renirano dia toy ny familiana ny ala ka hatrany am-bala fitateram-bahoaka.
Cave Aktun-Tunichil-Muknal . Io lava-dranomasina io dia hita vokatry ny fitsangatsanganana ireo tanàna Maya. Gaga ireo arkeôlôgy nahita tany amin'ny lava-bato lehibe misy taolam-paty. Azo inoana fa natao sorona izy ireo, satria fantatry ny olon-tsotra ho toy ny fidirana ao amin'ny tontolon'ny maty ilay zohy. Na dia eo akaikin'ny rano aza dia maina ny toetany ao anaty lava-bato.
Reserve Crooked telo . Io tahiry ornitolojika io dia hita any amin'ny faritra afovoan-tany, 40 km miala ny tanànan'i Belize . Ny anarana avy amin'ny teny anglisy dia midika hoe "hazo matevina", ho fanomezam-boninahitra ny hazo gazoara, izay mitombo ao amin'ny zaridaina maro. Ny vorona dia ahitana karazam-borona isan-karazany, ny sasany dia tsy manam-paharoa sy manana endrika afa-tsy amin'ity faritra ity. Misokatra isan'andro ho an'ny mpizaha tany ny valan-javaboary.
Môtô sy toerana ho an'ny besinimaro
Ireo mpizahatany tonga any Belize dia afaka mampitombo ny fialam-boly sy mitsidika toerana mahaliana, izay ahitana ny:
Battlefield Park . Raha ny marina dia azo lazaina fa ny valan-javaboary dia iray amin'ireo toerana amam-panao voalohany amin'ny vanim-potoanan'ny mpanjanaka. Hatramin'ny taonjato XVII dia sehatra iray natao hanaovana fivorian'ny tanàna. Amin'izao fotoana izao, ny Battlefield dia zaridaina manan-tantara amin'ny tanàna misy sehatra maitso, banky sy lalan-kely. Ny toerana misy azy dia ny tanànan'i Belmopan.
Gallery of Modern Art Image Factory , izay miorina ao an-drenivohitra Belize. Ny fanokafana ofisialy dia natao tamin'ny 1995, nanomboka tamin'izay dia nampiseho matetika ireo asan'ny mpanakanto Belize maoderina, ary koa mpanakanto sy mpanao sary sokitra ao Meksika sy Guatemala. Ao amin'ny fampiratiana maharitra ny trano fandraisam-bahiny dia misy karazana loko sy sary tsy nalaza.
Zoo any Belize . Io no zoo lehibe indrindra any Amerika Afovoany. Mahagaga fa tsy misy sela, ny biby rehetra dia mandeha an-kalalahana, eo amin'ny toetrany voajanahary. Voaro amin'ny sakana, hantsana ary trano kely izy ireo. Ny foto-kevitry ny zoo dia ny fiaraha-monina malalaka ny olona sy ny biby. Misy zoo any ambanivohitr'i Belmopan .
Ny andriambavilin'i Bairon Bliss , izay tsy mpanakorontana avy any Angletera. Raha vao nitsidika an'i Belize izy, dia nanjary tia an'ity firenena malaza ity izy nandritra ny androm-piainany sisa, ary ny lozam-pifaliany rehetra dia nitarika ny fampandrosoana an'i Belize. Ny lamandy dia miorina eo am-pototr'ilay tanànan'i Belmopan, 18 metatra ny haavon'ny tsangambato. Ny 9 martsa isan-taona avy eo amoron-dranomasina ho fahatsiarovana an'i Beyron Bliss dia mandeha ny fitetezam-paritra.
Institute of Happiness . Izany no anarana ofisialin'ny tranobe, izay misy ny fampisehoana sy ny teatra. Ny tranobe dia naorina tamin'ny 1955 teo amin'ny vola navelan'i Bairon Bliss ho an'ity firenena ity. Ny ivon-toerana dia mazàna mitazona ireo fampisehoana malaza ao an-toerana, ary koa ireo olo-malaza mpizahatany.
Resaka an'i Panama
Yacht Charter any Grenade
Toerana misy an'i Belize
Inona no hitranga avy any Panama?
Grenada - lakozia
Fitaovam-bolo vita amin'ny hoditra
Jelly jelly miaraka amin'ny gelatin - recipe
Black winter jacket - amin'ny inona no tokony harahina sy ny fomba hamoronana sary hoso-doko?
Rhinitis amin'ny zaza vao teraka
Mainty miorina eo amin'ny rindrina - ahoana no fialana?
Ahoana ny tokony hikolokolo ny plaffa?
Bill Cosby tsy mahita na inona na inona
Faniriana ny labia
Namaly i Daniel Craig hoe "Eny!" Ho an'ny tolotra nataon'ireo mpamokatra mba hiverina hitambatra indray
Armbant avy amin'ny laces
Zava-miafina eo amin'ny vondrona eo afovoany
Fialan-tsasatra any Polonina
Cocktails ho an'ny fahabangan-tena - ny cocktails tena mahasoa sy mahasalama
Ahoana no mampitombo ny takolaka?